EX - ABSDF: February 2013
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို မဆန်းစစ်ခင်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့ လိုအပ်သလဲံဆိုတာကို နည်းနည်းလေးပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ Read more »
ငတ်သထက် ငတ်လာကြတာမို့ Su Su Nway
ဆင်းရဲတွင်းနက်သထက် နက်လာတယ် ဆိုတာထက်၊ ငတ်သထက် ငတ်လာကြတာမို့ မိမိတို့ရွာအနီးက ဒီမြေလွတ်မြေရိုင်းတွေနဲ့ အသက်ဆက်ကြဖို့ဟာ ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည် ကို ကျမ ချစ်တယ် .. အန်တီစု ကို ကျမ ချစ်တယ် .. ကုန် ကုန် ပြောမယ် .. သူ ဘာလုပ်လုပ် .. သူ ဘာဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ် .. ကျမ ယုံတယ် .. အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး shared Thit Thit Myint Saing's photo.
ကျမ နေမကောင်းဘူး .. FB မတက်ချင်ဘူး .. ဒါပေမဲ့ .. နည်းနည်းလေးတော့ ရေးချင်လာတယ် .. ဒီပုံကို ကြည့် ... သူတို့ ၂ ယောက် မှာ .. ဆဲရေးတိုင်းထွာလောက်ရအောင် ဘယ်သူ့မှာ အပြစ်တွေကြီးနေပါသလဲ ..
မအူပင် Chocho Bakatha and Khaing Zar Min shared Ko Pouk's photo.
ဂျပန်ကြီး ... မင်းချစ်တဲ့ လယ်သမားတွေ မင်း ထကြည့်ပါဦး ရဲဘော်ရာ ...။
ပြည်ပရောက်တွေ ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ (၃)
Aung Moe Winသြဂတ်စ်လ ထဲမှာ ရှစ်လေးလုံးကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေရဲ့ ညီလာခံကို ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတယ် လို့ဆိုတယ်။" သမိုင်းကြောင်းကောင်းတဲ့သူတွေ ပြန်လာကြပါ၊ Capacity ရှိတဲ့သူတွေကို ၈၈၈၈ ညီလာခံကျင်းပတဲ့အခါ ဖိတ်မယ် " ဆိုတဲ့စကားစုတွေကို စိတ်ဝင်စားမိတယ်။သမိုင်းကြောင်းကောင်းသူတွေ ဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေကို ခေါ်တာလဲ။အရည်အချင်း ( capacity ) ဆိုတဲ့အရာကိုရော ဘယ်လိုစံနဲ့တိုင်းတာကြမှာလဲ။တက္ကသိုလ်တခုခုက မာစတာတွေ၊ ပါမောက္ခဘွဲ့ရသူတွေ ကို အရည်အချင်းရှိသူတွေအဖြစ်ခေါ်မှာလား။
ဝါအကြီးဆုံး ကက်သလစ် ဘုန်းတော် ကြီး လည်းဖြစ် စကော့တလန်က ရိုမန် ကက်သလစ် အသင်းတော် ကြီးရဲ့ ရာထူး အကြီးဆုံး ဘုန်တော်ကြီး လည်းဖြစ်တဲ့ Keith O'Brien ဟာ Read more »
မအူပင်မြို့နယ်တွင်းတွင် ဒေသခံရွာသားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပဋိပက္ခဖြစ်သဖြင့် ၂၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ
Tuesday, 26 February 2013 လယ်သိမ်းခံရသော ကျေးရွာသားများက နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်အော့ချတ်ဒ်
ကုမ္ပဏီပိုင်ငါးမွေးကန်ပေါင်အား ဖျက် ကာရေဖွင့်ချ၍ကျုပင်များအား မီးရှို့သောကြောင့် မအူပင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးမှပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် ထားစဉ် ဒေသခံကျေးရွာသားများနှင့် အဓိကရုံးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြားထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ ကာ နှစ်ဘက်စလုံးမှ စုစုပေါင်း လူ၂၀ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်ရှိ
နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာ မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ည ၁၁ နာရီခန့်က ရွာလူထုနှင့် ဒေသခံရဲများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၆၆ နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့မြင်ကွင်းများ ဟံသာဝတီကားပွဲစားတန်း နေရာရွှေ့ခြင်းကို လူ၈ဝဝကျော် ဆန္ဒပြ (ရုပ်/သံ)
မဲဇာချောင်းတစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများ သောက်သုံးရေ အခက်တွေ့
Star Focus Magazine, Volume-1, Issue-2
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် First Eleven ဂျာနယ် အတွဲ ၁၃ ၊ အမှတ် ၃၉
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် မဇ္ဈိမဂျာနယ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၂၃)၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၁၆) အမှတ်(၁၇)
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင် ၂ ဦး တွေ့ဆုံ (ရုပ်/သံ)
တူတံစဉ်နဲ့ နိုင်ငံတော် တူ၊
by Myanmar Journal on Sunday, February 24, 2013 at 5:45pm ·
ထိပ်တန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ၅၀ ပါ စီးပွားရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ တနင်္လာနေ့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။ Read more »
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ)ကို ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး မခန့်သင့်ဟု The Voice ဂျာနယ်ဖော်ပြ
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ
တရားဝင် ခန့်အပ်ခဲ့သည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးအား တပ်မေ တာ် မှ ဖြစ်သည့်အတွက် မခန့်သင့်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့် ဆရာဝန် တစ်ဦး ၏ ပေးစာ အ သွင်ဖြင့် The Voice ဂျာနယ်မှ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ကျပ်ခွဲရွာတွင် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွါး ကျေးရွာ NLD ရုံး ဖျက်ဆီးခံရ
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် အလင်းတန်းဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၇၄၅
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇)ရက်နေ့ ထုတ် Smart Pro Journal အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၆)
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃)ရက်နေ့ ထုတ် Tech Space နည်းပညာ ဂျာနယ် Vol 1 Issue 48
ဗြိတိသျှ မင်းသား အော်စကာ စံချိန်တင်
အရှိန်လွန် ယာဉ်တိုက်ရာ လင်မယား(၂)ဦးစလုံးသေဆုံး
ကိုမင်းကိုနိုင် ဦးဆောင်သည့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း ကျောင်းကုန်းမြို့ တွင် ဟောပြော
မာစီဒီး ကျည်ကာကားတွေ အပါအ၀င် နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေ ၀ယ်ယူဖို့အတွက် ကျပ်ငွေ
၁၈ ဘီလီယံဖိုး သုံးမယ့်အပေါ် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်
ကချင်လွတ်​မြောက်​ရေး​ တပ်မ​တော်နှင့်​ ပတ်သက်သူကို ​ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချ
မဆလခေတ် ပညာရေးကို စမ်သပ်တာဝန်ယူခဲ့သူ ဒေါက်တာညီညီ ၏ အမှား၂-ခုမှ တခုဝန်ခံချက်.....
ဘယ်အချက်တွေမှာ မှားခဲ့တာလဲ ဆရာ။
သင်နည်းစနစ် မှားတယ်ပေါ့ဗျာ။ အင်္ဂလိပ် စာသင်ရိုးတစ်အုပ်လုံးက စာဖတ်တာနားလည်ဖို့ (Reading Comprehension) ကိုပဲ အသားပေးထားတာလေ။ အမှန်မှာက အပြောတတ်ရေးကို ဦးစားပေးရမှာ။ ကျွန်တော်တို့က အင်္ဂလိပ်စာကို ဖတ်တတ်ရင်တော်ပြီ။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတာသား တာကို နားလည် ရင်တော်ပြီ။ Read more »
by Myanmar Journal on Saturday, February 23, 2013 at 3:14pm ·
အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ Anas Urbaningrum။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုမှာ
ပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ သတင်းထွက်လာပြီးတဲ့နောက် အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် ရာထူးက နုတ်ထွက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Read more »
နေရာတိုင်းတွင် အမြတ်မထုတ်သင့်ဟု ဒုဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း ပြောကြား
အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစတင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၆)ရက်နေ့ ထုတ် Digital Life Journal အတွဲ-၁၊ အမှတ်-၄၃ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် မီးလောင်မှုများဖြစ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၁)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်း ဂျာနယ် အမှတ် (၈၅၉)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄)၊ အမှတ် (၂၀) ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၁)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် သတင်းဂျာနယ် အမှတ် (၄၁)
by Myanmar Journal on Friday, February 22, 2013 at 5:43pm ·
Jimmy Savile အရှုပ်တော်ပုံ စစ်ဆေးချက် ထွက်ပြီ
သူ့ရဲ့ မဖွယ်မရာ လုပ်ရပ်တွေကို Newsnight က မထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဟာ ဘီဘီစီကို အကျည်းတန် စေခဲ့
သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘီဘီစီက အစီ အစဉ် တင်ဆက်သူ Jimmy Savile ရဲ့ လိင်မှု ဆိုင်ရာ မတော် မတရား ပြုကျင့် မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်လွှင့်ဖို့ စီစဉ်ထား တာကို ဘီဘီစီ Newsnight အစီအစဉ် ကနေ မထုတ်လွှင့်ဘဲ ဘာကြောင့် ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ သလဲ Read more »
Naung Zaw - သမိုင်းတခေတ်မှာ ဗေဒါလိုမျောရင်း ငါ--ရှာတွေ့ တဲ့ စတာလင် မတ်(ခ်)၊ လီနင် ဒီမိုကရေစီတဲ့
လမ်းဘေး ဈေးသည်တွေကို အကြမ်းဖက်အရေးယူနေ (ရုပ်/သံ)
(၁၈)ဘီးယာဉ်ကြိတ်၍ တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ
ယာဉ်တိမ်းမှောက်၍ (၄)ဦးသေ၊ (၃၆)ဦးဒဏ်ရာရ
NLD ကျန်းမာရေး ကွန်ယက်မှ ကျန်းမာရေး အဆင့်မြင့်မားရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို တည်ဆောက်ရေး အဆိုရှုံးနိမ့်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် The Voice Weekly Vol.9/No.8
၀န်ကြီး သုံးဦးနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၄၈ ဖွဲ့တွေ့ ဆုံ
မြန်မာ့လေကြောင်းမှ လေယာဉ်အဟောင်း တစ်စင်းကို ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တွင် ပြသမည်
မြောက်ကိုရီးယားမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ အင်တာနက် သုံးနိုင်တော့မည်။
အလုပ်အကိုင်နဲ့ အလည်အပတ်အတွက် သွားရောက်ကြသူ နိုင်ငံခြားသားတွေ မကြာခင်မှာ
မိုဘိုင်းဖုံးကတဆင့် အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
by Win Ko on Friday, February 22, 2013 at 6:44pm ·
ခုတလော စိတ်တို့က ဂဏှာမငြိမ် ယောက်ယက်ခတ်နေသည်။
အတော်ကြာကြာ စွန့်ခွာခဲ့သော အမိမြေကို တဖန်ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်လိုသော အတွေးတွေက လွှမ်းမိုးနေခဲ့သည်။ Read more »
Myanmar Historical Dateline 1886-1942 by mayunadi Posted by
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့(၂)ဖွဲ့ ရထားလမ်းတံတားအား မိုင်းဖေါက်ခွဲမှု ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ဒေသတွင်း ရောက်ရှိနေ
မရမ်းကုန်းက ကျူးကျော်အိမ် ၃ဝဝနီးပါးသိမ်းယူမှု စွပ်စွဲချက်တွေ မမှန်ဟု ဦးအိုက်လင်းငြင်းဆို (ရုပ်/သံ)
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ပါလီမန်မှာ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေး (ရုပ်/သံ)
မြန်မာနှင့်မလေးရှား ယူ ၂၃ ခြေစမ်းပွဲ ဂိုးမရှိ သရေကျ
မိဘမေတ္တာခရီးသည် ယာဉ်ပက်လက်လှန် တိမ်းမှောက်မှု (၁၇)ဦး ဒဏ်ရာရ
သေကံမရောက် သက်မပျောက်တဲ့ ကြံစိုက်ခင်း ၀န်ထမ်းများ
မန္တလေး-တောင်ကြီး ရန်ကြီးအောင်မှန်လုံကား ဘရိတ်ပေါက် ချောက်ထဲကျ (၁၇)ဦး ဒဏ်ရာရ
မိမိတို့ပိုင်လယ်မြေများ ဘူဒိုဇာဖြင့် မထိုးရန်ဟန့်တားခဲ့သည့် ရွာသား(၇)ဦး တရားဆွဲခံရ
အထက်တန်းစာမေးပွဲဖြေချိန် မီးရရန် နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံများ လည်ပတ်မှု ရပ်ဆိုင်းပေးမည်
သောက်ရေကန် ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် တာဝန်ရှိသူများအား ဒေသခံများမကျေနပ်
ဘိန်းဖြူများ သယ်ဆောင်လာသူ ဆိုင်ကယ်သမားနှစ်ဦးကိုဖမ်းမိ
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအား ဦးတည်၍ လှုံ့ဆော်သူအချို့အပေါ် အစိုးရမှ မည်သည့်အတွက် အရေးမယူကြောင်း ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေမေးခွန်းထုတ်
Lun Swe and Ma Su Mon shared Ye Yint Nge's photo.
February 19, 2013 မြေသိမ်းမှုများ၌ အမှန်တ ကယ်သိမ်းယူသော အိုးအိမ်ဦးစီး ဌာနအား ရည်ရွယ်ဦးတည်ခြင်း လုံးဝမရှိဘဲ ယင်းအိုးအိမ်ဦးစီးဌာန မှ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြန်ချပေးသော ပုဂ်္ဂလိကလုပ်ငန်းများအား ပြည်သူများမှ အထင် လွှဲမှားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်သူ အချို့ရှိနေပြီး။ Read more »
ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ် (၈)
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉)ရက်နေ့ ထုတ် SHADE ဂျာနယ် အတွဲ(၇)၊ အမှတ် (၁၃)
ဖုန်းဆင်းကတ်ပျောက် ကိုယ်တိုင်လျှောက်လျှင် နေ့ချင်း ရပြီ
ဆီတင်ယာဉ် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ ပြောကြား
ခြံစည်းရိုးကြေညာချက်ကြောင့် အချင်းပွားမှု များပြားနေ
နယ်စပ်ကနေ တင်သွင်းလာတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ ကို သတိပေးထား (ရုပ်/သံ)
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း လူထုဆန္ဒ အလေးထားမည်ဟု ကယားပြည်နယ်အစိုးရ ဆို
ရန်ကုန်တွင် မွတ်စလင်စာသင်​ကျောင်း​တခု အခင်းဖြစ်ပွား​ပြီး​နောက် ချိပ်ပိတ်
Shwe Khae shared Yamoun Nar's photo.
"ပြည်ပရောက်တွေ ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ ဆိုတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်အမေးစကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ တောထဲက သူပုန်တကောင်အနေနဲ့ ဖြေချင်တာက လက်ရှိ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းဟာ စိတ်ချရတဲ့၊ တည်ငြိမ်တဲ့၊ အမျိုးသား ညီညွှတ်ရေးကို အာမခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း ဖြစ်ပါပြီလား ...
တိုင်းပြည်ရဲ့ အာဏာခွဲဝေရေး ကိစ္စ ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်ထဲက စစ်သား ၂၅ %၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာ၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီတို့ရဲ့ အာဏာ .. စတဲ့ အချိုး မမျှ အာဏာ ခွဲယူထားတာကို ပြောတာများနေတော့ ... ဒီတခါမှာ အာဏာခွဲဝေရေး မဟုတ်ဘဲ "ပုဂ္ဂလိက ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်" ကိစ္စ ပြောချင်ပါတယ်။
by Myanmar Journal on Tuesday, February 19, 2013 at 4:48pm ·
မန္တလေး တရုတ်လူဝင်မှု စစ်မယ်
မန္တလေးမြို့လယ် တရုတ်လူမျိုး ပိုင်ဆိုင်မှုများ
တရားမဝင် ဝင်ရောက် နေထိုင်တဲ့ တရုတ် လူမျိုးတွေ ရှိနေသလား အိမ်ထောင်စု စာရင်းတွေ သေချာ စစ်ဆေးပြီး မမှန်မကန် ဆောင်ရွက် တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အရေးယူ သွားမယ်လို့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦး ကျော်ကျော်ဝင်းက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ထားဝယ်မြေကွက် ဆက်လက် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်
မသန်စွမ်းကျောင်းသူ မစုပုံချစ် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာ
မြန်မာပြည် ပြောင်းလဲရေး ၈၈ခေါင်းဆောင်များ နဲ့ ပြင်သစ်ခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေး
ဟံသာဝတီယာဉ် ရောင်းဝယ်ရေး စခန်း မပြောင်းရွှေ့ရေး ကြေညာချက်ထုတ်၍ ဆန္ဒပြ စက်ဘီးဖြင့် ပုဂံလည်သည့် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများ၏ ငွေနှင့် ပစ္စည်း နှိုက်ယူခံရမှု ဖြစ်ပွား
ကုလအထောက် အပံ့ပစ္စည်းများ ကချင်ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ စတင်ရောက်ရှိ
မန္တ​လေး​က ထိုင်း​ဘုရင်အုတ်ဂူ ထိုင်း​သု​တေသီတို့​ ​လေ့​လာ​ဖော်ထုတ်ပြီ
အိန္ဒိယမှာ အလုပ်သမား​သမဂ္ဂများ​ ဆန္ဒပြ
ပြည်ထောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ ကုိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (ယူအန်အက်ဖ်စီ) တို့ဟာ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေ
by Myanmar Journal on Monday, February 18, 2013 at 4:04pm ·
မြန်မာ-တရုတ် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး တိုးမြှင့်
မြန်မာ မိန်းကလေး တယောက်ကို တရုတ်ငွေ ယွမ် နှစ်သောင်း၊ မြန်မာ ငွေနဲ့ ဆိုရင် ၂၆ သိန်းနဲ့ ဝယ်ယူနေ
တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ အကြား လူကုန် ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ အတွက် တတိယ မြောက် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ဆက်ဆံရေး ရုံးတခု ကို အခု နှစ်ထဲ ထပ်မံ ဖွင့်လှစ် သွားဖို့ နှစ်ဘက် အစိုးရ အကြား သဘောတူ ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ ထုတ် မဇ္ဈိမဂျာနယ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၂၂)
ကချင်ဒုက္ခသည်များ ကူညီရန် UN အခက်ကြုံ
ပျောက်ဆုံး မြန်မာသင်္ဘောသားတွေကို ဆက်ရှာဖွေ
မျက်နှာဖုံးစွပ်လူသတ်မှု တရားရုံးက အပြီးသတ် မစစ်ဆေးနိုင်သေး
မြေဧကပေါင်း၂၃၅၀၀ ကျော် လယ်ယာမြေ သိမ်းယူမှုကြီး (ရုပ်/သံ)
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) ရက်နေ့ ထုတ် အလင်းတန်း အနုပညာ ဂျာနယ် အမှတ်(၇၄၄)
ဆိုင်ကယ်ပျောက်လို့ရဲကိုတိုင် ရှာပေးဖမ်းပေးရမယ့် ဒုက္ခ
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်းနှင့် အစိုးရတို့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲစရန် အကြိုတွေ့ဆုံ
တရုပ်ဟာ မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့ မှာလား။။။ မျိုးသန့်
by Myo Thant on Thursday, April 12, 2012 at 11:11pm ·
တရုပ်နိုင်ငံကို နောင်တက်လာမည့် မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံတခုအဖြစ် ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေကပြော ဆိုနေကြတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေ့အကျဆုံးသော ယဉ်ကျေးမှုပေါ်ထွန်းလာခဲ့ သည့် နိုင်ငံတွေအနက်က တခုဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန် အသင်းကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲနေပြီးလား
မိုးမိတ်မြို့ခံ လူထုများ ရွှေဗျိုင်းဖြူ ကုမ္ပဏီကြောင့် စိုးရိမ်စရာ ကြုံနေရ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆွေးနွေးချက် အလေးထားမည်ဟု ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ရှင်းလင်း
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေထံ ကချင်ဘင်လာဒင် အမည်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်စာပေးပို့
တပ်မြေကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်လျှင် နားပိတ်ပြီးသာအိပ်နေတော့
ယင်းမာပင်မြို့နယ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကာ နေအိမ် ၃၉ လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့
ကုလကူညီကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်တန်း ဖားကန့်ဒုက္ခသည်စခန်း ရောက်ရှိ
မန္တလေးကြက်ခြံတခြံ အပြင်းစား ကြက်လည်လိမ်ရောဂါ ဖြစ်ပွား
ဆည်မြောင်းတူးဖော်မှုကြောင့် တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့
တိုက်ခန်းများတွင်ရေ ပြဿနာများရှိသောကြောင့် လုံးချင်းအိမ် အ၀ယ်များလာ
စည်ပင်ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းသော စာသင်ကျောင်းကိုဖျက်မှု ဘာသာရေးအရ ဝါဒဖြန့်လှုံ့ဆော် (ရုပ်/သံ)
၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးကြွယ် ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ညီလာခံ တက်ရောက်မည်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင် အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော် မီးလောင်
Bo Han and 10 others shared Aye Aye Soe Win's photo.
လွှတ်တော်၏လားရာ၊ သေနတ်ကိုင်အစိမ်းတွေ နဲ. နိုင်ငံရေးပွဲစားတွေ ဝေစုမတဲ.ခြင်း။ ကျော်ရင်လှိုင်၊ လှမောင်ရွှေနဲ.
မရှိတော.တဲ.နေ၀င်းမောင် အရပ်သားအကြီးစား စီးပွားရေးသမားတို.၏ ထရီယို ဥာဏ်ပညာ ခံတပ်က၊ ဒေါ်စု အခက်အခဲတွေရေရှည်မှာ ကယ်ထုတ်သွား ဖို. ရှိုးထားပြထားတဲ. သူတို. ရည်မှန်းချက်အချို. အောင်မြင်ချင်သလိုလို ဗျူဟာတွေ
ရှိနေပုံ ရတယ်။ Read more »
ပြည်သူများကို ဒုက္ခပေးနေသော လမ်းဘေး လောင်းကစား အယောင်ပြ လိမ်လည်သူများ
အင်းလေး ဟိုတယ်ဇုန် တွေ့ ဆုံပွဲမှာ iPad နဲ့ ဖဲကစားနေတဲ့ စည်ပင် ညွန်မှူး
၀န်ထမ်းများ၏ သတ်မှတ်ရုံးချိန် Vs အချိန်ပို တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ဖြူး တမြို့ လုံး တုန်းလှုပ်စေတဲ့ အပိုင်းပိုင်း ပြတ်နေသည့် အမျိုးသမီး (သတင်း-ဓါတ်ပုံ)
မကွေးတွင် မြေနံရံထိန်း မြေကြီးပြိုကျ၍ အလုပ်သမား ၃ ဦးသေ
နိုင်ငံခြားသားအခြေချသူ လက်ခံမဲ့အစီအစဉ် စင်္ကာပူမှာဆန့်ကျင် Read more »
Ko Nyi သရ၀ဏ်(ပြည်) ၂၀၀၆ ခုနှစ်နှစ်လည်ခန.်ကဖြစ်သည်။ ဥရောပတိုက်သား ကမ္ဘာလှည်.ခရီးသည်တစ်ဦးကို ကျွန်တော် မြန်မာပြည်အနှံ. ဧည်.လမ်းညွှန်အဖြစ်လိုက်ပါဝန်ဆောင်မှုပေးရသည် ။ ဧည်.သည်၏အမည်မှာ မစ္စတာ ဂွမ်တာ(Gunter) ဖြစ်သည် ။ မစ္စတာဂွမ်တာသည် သည် ကျွန်တော်.မိတ်ဆွေ မြန်မာမလေးမသင်္ဂီနှင်.အိမ်ထောင်ကျပြီး နိုင်ငံခြားမှာနေသည် ( ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာတော. မပြောလိုတော.ပါ ) ။ ထိုသို.သွားလာလည်ပါတ်ကြရင်း တစ်နေ.တွင် နိုင်ငံခြားသားကြီးက ထူးဆန်းသောစကားတစ်ခွန်းကို ဤသို.ပြောလာ၏ ။ “ ညီညီ မင်းသိလား ၊ ငါတို.နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ.မြန်မာသံအမတ်ကြီးက အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင် အမြဲတမ်းသုံးကြောင်းပဲပြောတယ် ၊ ပြီးရင် ဘာမှ ဆက်မပြောတော.ဘူး “ Read more »
by Myanmar Journal on Saturday, February 16, 2013 at 5:27pm ·
ပြည်ပက အခြေချနေထိုင်သူတွေကို လက်ခံပေးပြီးတော့ နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေကို တိုးမြှင့်ဖို့ အစီအစဉ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ရှားရှားပါးပါး အစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲမှာ လူပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိ လူဦးရေ ၅.၃ သန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြင့်မယ့် အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ ဟစ်ကြွေး၊
မကျေနပ်ကြောင်းရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ မိုးထဲရေထဲမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
မြောက်ပိုင်းတွင်ကြွေလွင့်သွားသောကျောင်းသားများအမှတ်တရနေ့သို့ ABSDF ဗဟိုကော်မတီမှ ပေးပို့သော ၀မ်းနဲခြင်းသ၀ဏ်လွှာ...
လွမ်းမောခဲ့ရသော ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် နွေရက်များ
by K Khaing July on Thursday, November 15, 2012 at 1:09am ·
ကျနော် ပညာနို့ရည် သောက်သုံးခဲ့သော အမိ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်နှင့် ဝေးကွာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် တခုကျော်ခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးကို အလည်တခေါက် ပြန်ရောက်ခဲ့ပြန်သည်။ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက ကျင်လည်ခဲ့သည့်၊
by Myanmar Journal on Saturday, February 16, 2013 at 4:29am ·
ကမ္ဘာကြီး အနီးက ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားတခု ဖြတ်သွား
ကမ္ဘာကြီး အနီးက ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှား ဖြတ်သွား
ဘောလုံးကွင်း ထက်ဝက် စာလောက် ရှိတဲ့ ဂြိုလ်သိမ် ဂြိုလ်မွှား တခုဟာ ကမ္ဘာမြေအနီး ကနေ ဘေးအန္တရာယ် မပေးဘဲ ဖြတ်သွား ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အရွယ်အစား ရှိတဲ့ ဂြိုလ်သိမ် ဂြိုလ်မွှားတခု ကမ္ဘာနဲ့ အနီးဆုံးကို ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင် တွေက ပြောကြပါတယ်။
ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီ ၁၂ ဦး နေပြည်တော်တွင် ဖမ်းမိ
မြို့ နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အရက်အတူ သောက်တဲ့ လောင်းကစား ဒိုင်ကြီးများ လောင်းကစားဥပဒေ ကင်းလွတ်ခွင့် ရသလား
ဓနုဖြူမြို့မှ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်း တချို့လူငယ်များအား ထိုင်နိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် ပို့ ဆောင်နေ
ကွမ်းခြံကုန်းမြို.နယ် ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးရုံးတွင် လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူမှုများ အဂတိလိုက်စားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
ပေါက်ခေါင်းမြို့ တွင် ၀ါယာရှော့ ဖြစ်၍ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွါးခဲ့
အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်း (၁၄၄) အမိန့် ထပ်ထုတ်ပြန်
အစီရင်ခံစာကို စောင့်ကြည့်ပေးပါရန် oမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှ မေတ္တာရပ်ခံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကော့မှူးမြို့ နယ်ခရီးစဉ် (27 photos)
နေပြည်တော်မှ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ကျူးကျော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရ (ရုပ်/သံ)
ပြည်တွင်းစစ်၏အရိပ်အောက်မှ လွတ်မြောက်ကာစ ထရေဖိုးကွီး ရွာကလေး
ရွှေကို မလို ရေကိုသာ လိုတဲ့ ပခုက္ကူနယ် မြိုင်မြို့နယ်ထဲက ရွာကလေး (ရုပ်/သံ)
တရုပ်ဟာ မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့ မှာလား။။။ ...
အခြေခံဥပဒေဟု ဆိုရာဝယ် (၁) မျိုးသန့်
အုတ်ခဲကျိုးဇော်ကြီး (သို့) သတ္တ၀ါ တကောင်အကြောင်း (...
ပရဟိတ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အတုယူဖွယ်
ကိုမင်းဇင် နှင့် အင်တာဗျူး
မော်ကွန်းချီပြီ အနှိုင်းမဲ့ အာဇာနည်
ပင်လုံစာချုပ်ပါ နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးသော သဘောတူညီခ...
ကားလ်မာ့က်စ်မိတ်ဆက် (ဘာသာပြန်) အခန်း (၃)
ဖက်ဒရယ် ကကြီး ခခွေး
စင်မြင့်ထက်မှ နေ၍ ပြည်သူကို ပြောသော စကားများ (အယ်ဒ...
မှုခင်းစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း (Criminal Investigation...
အထက်တန်းကျတဲ့စိတ်နဲ့ စာခိုးသူ ပြဿနာများ( ဖေမြိုင် ...
စစ်ဟိန်းသံတချို့ကြောင့် ရင်တမမ ဘုရားတမိ (မောင်ဝံသ)...
ကျန်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတော့မည်
ဗဟိုကော်မတီစုံညီအစည်းအဝေး ၁/၂၀၁၃ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်...
လျှပ်တပျက်ဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၁၆) စာ ၄၂ တွင် ဖော်...
မြန်မာတပ်မတော်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ် တပ်မတော်ကိုနှိုင်းယ...
ထမင်းတစ်နပ် လျော့စားဆိုသည့် လယ်ဆယ်ဝန်ကြီးကို သမ္မတ ...